Redmi Band dia ofisialy: Mampanantena fizakan-tena 14 andro | Androidsis
Redman Nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny segondra smartband miaraka amin'ny ny famotsorana azy vaovao, Band. Nahagaga ny olon-drehetra tamin'ny fehin-tànana lafo vidy miaraka amina endri-javatra lehibe hodinihina, anisan'ireo nisongadina ny fanaingoana ny efijery miaraka amina dialy 70 isan-karazany.
Mitovy be amin'i Redmi Band We Band 4 avy amin'i Xiaomi, na dia manana tontonana somary avo kokoa aza izy, santimetatra vitsivitsy avy amin'io modely io. Mandeha misaraka izao i Redmi, nandefa ny telefaona Redmi K30 Pro, filokana tena ilaina tokoa fa te hivarotra singa vitsivitsy ianao rehefa tonga eo amin'ny tsena Aziatika.
1 Endri-javatra Redmi Band
Endri-javatra Redmi Band
La Redmi Band dia manana efijery OLED miloko 1,08-inch mahitsizoro ny endrika ary ny vahaolana dia ambany noho ny Xiaomi Mi Band 4. Ny fehin-kibo dia silicone, amin'ny voalohany dia hisy loko efatra amin'ny ankapobeny ary mena, manga, maitso ary mainty.
Ny tarika mahay mamirapiratra ho an'ny fizakantena, afaka maharitra 14 andro amin'ny fampiasana, na dia hiankina betsaka amin'ny fampiasana azy io amin'ny lahasa fanatanjahan-tena aza. Izy io dia manana fanaraha-maso ny tahan'ny fo amin'ny alàlan'ny mpamaky tafiditra ao ambadiky ny fehin-tànana, mandany segondra vitsy monja hanatanterahana ny refy.
Tarika Redmi manatanteraka tatitra isan-karazany amin'ny alàlan'ny fampiharana izay tsy maintsy ampidininay avy amin'ny Google Play Store, noho izany dia tsy maintsy ampifandraisinay amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny finday. Miampy izany ny fampandrenesana fomba fiaina mipetrapetraka izay hampitandrina anao raha tsy manao fanatanjahan-tena isan'andro ianao miaraka amin'ny hafatra fampitandremana.
La Redmi Band dia tsy misy daty famotsorana, ny fantatra dia ho tonga voalohany any Chine izy ary hitatra amin'ny kontinanta samihafa ny fanitarana hatramin'ny volana Mey. Ny vidin'ny tarika dia 99 yuan, ny mitovy 13 euro eo ho eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Redmi Band dia ofisialy: Mampanantena fizakan-tena 14 andro
Ny patanty dia manambara ny iPhone miaraka amin'ny interface ho an'ny fampiasana anaty rano
Samsung Galaxy A21s dia mandalo an'i Geekbench mampiseho ny CPU-ny